Xiddigaha dhaawacan, kuwa shakigu kujiro iyo kuwa hal jaalle u jira inay seegaan lugta labaad ee CL kulanka caawa Wolfsburg v Real Madrid – Gool FM
Xiddigaha dhaawacan, kuwa shakigu kujiro iyo kuwa hal jaalle u jira inay seegaan lugta labaad ee CL kulanka caawa Wolfsburg v Real Madrid
(Wolfsburg) 06 Abriil 2016 – Kooxda kubadda cagta Wolfsburg ayaa markii ugu horreysay abid ciyaaraysa caawa wareegga siddeed dhammaadka koobka horyaallada Yurub, halka kooxda ay la ciyaarayaan ee Real Madrid ay ciyaareyso wareegaan markoodii 33-aad.
Haddaba waxaan halkaan ku eegeynaa xiddigaha dhaawacan, kuwa soo laabtay, kuwa shakigu ku jiro kulankan iyo kuwa hal kaar oo digniin ama jeelle ah u jira inay seegaan lugta labaad ee siddeed dhammaadka Champions League.
Haddii aynu ku horreyno kooxda martida loo yahay ee Jarmalka caawa waxaa ka maqan Jung oo dhaawac jilibka ah qaba, halka Caliguiri uu taam ahaanshihiisa shaki ku jiro maadaama uu dhaawac lugta ah soo gaaray.
Naldo ayaa isna soo laabtay, laakiin weli ma uusan ciyaarin, iyadoo Nicklas Bendtner uusan fursad u heli doonin inuu ka horyimaado Real Madrid, madaama ay kooxda iska fasaxday.
Dhinaca kale kooxda reer Spain ee Real Madrid waxaa dhaawac kaga maqan kulankan daafaca dhexe Varane, laakiin inta kale Zidane waxa uu haystaa koox taam ah.
Sergio Ramos, Danilo iyo Casemiro ayaa ku qasban caawa inay si asuubeysan u dheelaan maxaa yeelay haddii ay jaale qaataan kulankan waxa ay seegi doonaan lugta labaad ee siddeed dhammaadka Champions League oo ka dhici doonta garoonka Santiago Bernabeu.
Macallin Manuel Pellegrini oo ka hadlay xaaladda dhaawac ee Yaya Toure, miyuu diyaar u yahay kulanka caawa PSG ee Champions League?
Xiddigaha dhaawacan, kuwa shakigu kujiro iyo kuwa hal jaalle u jira inay seegaan lugta labaad ee CL kulanka caawa PSG v Man City